Barlamaanka ka doodaya sharciga Doorashooyinka Federaalka ee 2021.
Mudanayaasha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta oo sabti ah in markale ka doodaan sharciga doorashooyinka Qaranka. Kulanka Guud ee Golaha Shacabka ayaa ajandahiisu yahay sii waddida doodda akhrinta 2aad ee Sharciga Doorashooyinka Qaranka, kaasi oo ay soo diyaariyeen Guddiga Doorashooyinka ee Golaha Shacabka. Xildhibaannada ayaa maalintii khamiistii dood adag ka yeeshay […]
Mudanayaasha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta oo sabti ah in markale ka doodaan sharciga doorashooyinka Qaranka. Kulanka Guud ee Golaha Shacabka ayaa ajandahiisu yahay sii waddida doodda akhrinta 2aad ee Sharciga Doorashooyinka Qaranka, kaasi oo ay soo diyaariyeen Guddiga Doorashooyinka ee Golaha Shacabka. Xildhibaannada ayaa maalintii khamiistii dood adag ka yeeshay [&#8230;]